'चाँडै श्रीमान् बन्न चाहन्छु' ~ The Nepal Romania
फिल्म 'भूमरी'बाट २०४५ सालदेखि अभिनय यात्रा सुरु गरेका नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठले एक सयभन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन्। 'अजम्बरी नाता', 'आफ्नो मान्छे,' 'सुखदुःख,' 'आफ्नो मान्छे, आफ्नै हुन्छ' लगायत सुपरहिट फिल्म दिएका उनी केही समयको ग्यापपछि फेरी आफ्नै निर्माणमा बनेको फिल्म 'कहाँ भेटिएला'बाट रजतपटमा उदाए। आफूले अभिनय गरेका ९५ प्रतिशत फिल्म हिट बनाएका उनको 'कमब्याक' पनि सार्थक बन्यो। नेपाली फिल्मको बजार ओरालो लागेका बेला उनको लगानीमा बनेको फिल्म हिट भएपछि उनी फेरि फिल्ममा देखिन थालेका छन्। यही शुक्रवारदेखि उनले अभिनय गरेको फिल्म 'श्रीमान्श्रीमती' चल्दैछ।
'श्रीमन्श्रीमती'मा कस्तो भूमिकामा देखिँदै हुनहुन्छ?
यो फिल्ममा श्रीमान्को भूमिकामा दोहोरो चरित्रमा प्रस्तुत भएको छु। एउटा असल र अर्को खराब श्रीमान्।
श्रीमान्को भूमिका गर्दा साँच्चिकै श्रीमान् हुन मन लागेन?
फिल्ममा श्रीमान् त धेरैपटक भइसकेँ। तर, यो फिल्मबाट रियल लाइफमा पनि एउटाको श्रीमान् त हुनैपर्ने रहेछ भन्ने महसुस भएको छ।
श्रीमती के हुन् जस्तो लाग्यो?
श्रीमती भनेको फूल हो जसलाई जति राम्ररी स्याहार्न सक्यो, त्यति नै सुन्दर हुन्छ। त्यस्तै माटोको घैँटो पनि हो। स्याहार भएन भने प्याट्टै फुटेर काम नलाग्ने हुनसक्छ। श्रीमती पुरुषको जीवनका लागि सुख र दुःखको चौतारी पनि होजस्तो लाग्यो।
रियल श्रीमान् कहिले बन्ने त?
यो फिल्ममा अभिनय गरेपछि मलाई चाँडोभन्दा चाँडो आफूलाई राम्रोसँग बुझ्नसक्ने महिलाको श्रीमान् हुन हतार भएको छ।
यो वर्षभित्रै श्रीमान् बनिन्छ त?
तपाईँको रिल जोडी श्वेतासँग अफेअर चलिरहेको हल्ला छ नि?
सुरुमा हाम्रो जोडी जम्ने होइन कि भन्ने डर थियो। निरुता सिंह, जल शाह, झरना थापासँगजस्तै श्वेतासँग पनि मेरो जोडी सुहायो। हुँदाहुँदा रियल जोडीका रूपमा हेर्न थालियो हामीलाई। श्वेता मेरो नजिकको र साह्रै मिल्ने साथी पनि हुन्। उनी र म एकअर्काको काममा सहयोग गर्ने, विदेशका कार्यक्रममा सँगै जाने र आफ्ना कुरा सेयर गर्ने नजिकका साथी छौँ, अहिलेसम्म। उसको र मेरो पारिवारिक सम्बन्ध पनि राम्रो छ। पेसा एउटै भएकाले नाम जोडिनु नौलो कुरा होइन।
भविष्यमा रियल जोडी हुनसक्छिन् त श्‍वेता?
भोलिको कुरा आज के गर्नु? तर, त्यो असंभव छ भन्ने पनि होइन।
यो बीचमा बोलचाल बन्द भयो भन्ने पनि सुनियो नि?
मैले पत्रिकाबाटै थाहा पाएको हुँ। मेरो अहिलेसम्म त्यस्तो मनमुटाव श्वेतासँग मात्रै होइन, कसैसँग भएको छैन। मलाई नजिकबाट जान्नेहरूलाई पनि सोधे हुन्छ।
कुनै महिलासँग अफेयर चलेन?
चलेन। मैले स्कुल पढ्दाखेरि एउटीलाई औधी मन पराएको थिएँ। त्यो प्रेम लामो समय चल्यो। प्रेममा गरिने सबैप्रकारका त्याग गरियो पनि। तर, धोका पाइयो। त्यसपछि मैले पाठ सिकेँ। त्यसैले यो बीचमा कुनै महिला मेरो जीवनमा आएनन्।
श्रीमती कस्ती हुन् भन्ने चाहनुहुन्छ?
मिठो बोल्ने, राम्रो व्यवहार गर्ने स्वभाव भएकी।